Emechiela Loop Cooling Tower: Pharmaceutical Industry
Usoro mgbatị dị oke mkpa na Industrylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọgwụ, n'ihi ya, anyị chọrọ akụrụngwa iji wepụ okpomọkụ na-achọghị site na usoro ahụ ma ọ bụ nyefee okpomọkụ na mgbasa ozi ọzọ maka iji ya mee ihe ọzọ.
Mgbanwe ikpo ọkụ bụ akụkụ dị mkpa nke usoro mmepụta ọgwụ na ọgwụ kemịkal. SPL meeJụrụ ụlọ elu, ngwakọ oyi na Evaporative Condenser Ezubere akụrụngwa iji rụọ ọrụ n'okpuru ọnọdụ ịdị ọcha kacha mma yana yana Ezi Ọrụ Nrụpụta. Ọ kwesịrị ịdị kọmpat ma rụọ ọrụ nke ọma, mana ọ dị mfe ihicha ma debe ya. SPL dị iche iche nke Ngwaahịa na-emezu ihe ndị a chọrọ na ndị ọzọ. Nakwa ịhụ na ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, ihe ngwọta anyị na-enyere mgbake ọkụ ọkụ iji mee usoro ka akụ na ụba.
Fọdụ n'ime usoro ọgwụ ndị na-achọ ka usoro jụrụ oyi dị mma:
•Ogbe nhazi na multipurpose reactors, nke chọrọ mmiri jụrụ oyi maka mmeghachi omume kemịkal na okpomọkụ dị elu na kristalization nke ngwaahịa ikpeazụ na obere okpomọkụ
•Ude mmanụ tupu ịwụfu na nkwakọ ngwaahịa
•Na-achịkwa okpomọkụ nke usoro ịkpụzi mgbe ị na-akpụ gelatin maka capsules.
•Gba egwu na mmiri jụrụ oyi nke ude tupu ha agwakọta ọnụ
•Kpo oku na obi jụrụ n'oge nwoke ịga ụlọ ọgwụ nke mmiri ọgwụ ọgwụ
•Mmiri eji mmiri granulation usoro maka mbadamba akpụ